एन्ड्रोइड अटो के हो र यसले कसरी काम गर्छ? | मोबाइल फोरम
एन्ड्रोइड अटो के हो र यसले कसरी काम गर्छ?
इभान सेर्नाडास | | Android, अपरेटिंग प्रणाली
जब हामी व्हीलमा सुरक्षाको बारेमा कुरा गर्छौं, हाम्रो स्मार्टफोनको प्रयोग हाम्रो पक्षमा छैन। ड्राइभिङ गर्दा मोबाइल फोन ह्यान्डल गर्दा एकाग्रता गुमाउँदा दुर्घटना हुने सम्भावना एकदमै बढ्छ।
ड्राइभरहरूले सडकमा नेभिगेसन, सन्देश वा संगीत एपहरू प्रयोग गर्नु धेरै सामान्य छ। यी कार्यहरूका लागि, यो हाम्रो टर्मिनलको स्क्रिनमा छोइरहनु वा नहेरीकन गर्नु राम्रो हुनेछ। एन्ड्रोइड अटोले यो सम्भव बनाउँछ। निम्न मार्गदर्शिकामा हामीले एन्ड्रोइड अटो के हो र यसले कसरी काम गर्छ भनेर विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्छौं.
1 एन्ड्रोइड अटो के हो?
1.1 म कसरी एन्ड्रोइड अटो स्थापना गर्छु?
1.2 कार स्क्रिनमा एन्ड्रोइड अटो
1.3 स्मार्टफोन स्क्रिनमा Android Auto
1.4 Android Auto कसरी प्रयोग गर्ने?
1.4.1 यहाँ तपाईंले एन्ड्रोइड अटो मार्फत गर्न सक्ने कुराहरूको सूची छ:
एन्ड्रोइड अटो के हो?
एन्ड्रोइड ओटो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको एकीकृत गुगल सहायकसँगको सरलीकृत इन्टरफेस हो ड्राइभरलाई ड्राइभिङ गर्दा आवाज मार्फत आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरण वा उपयुक्त गाडीसँग अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ। यसको पहिलो संस्करण २०१४ मा रिलिज भएको थियो, र त्यसबेलादेखि यसले ड्राइभिङलाई सजिलो र सुरक्षित बनाउन निरन्तर सुधार गर्दै आएको छ।
यो अनुप्रयोगहरूको भीड नियन्त्रण गर्न आदेशहरू प्राप्त गर्न सक्षम छ जुन सामान्यतया हाम्रा हातहरू प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ, जस्तै नक्सा, Spotify वा WhatsApp, उदाहरणका लागि, र यसैले हामीले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा स्क्रिन छुनु पर्ने कुरा बिर्सन सक्छ। यो सबै ए मार्फत सरल र सफा लेआउट पाङ्ग्रा पछाडि कुनै पनि अवरोधहरूबाट बच्न।
म कसरी एन्ड्रोइड अटो स्थापना गर्छु?
तपाईं आफ्नो गाडीको स्क्रिन र स्मार्टफोन दुवैमा Android Auto प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाल यस अनुप्रयोगसँग मिल्दो 500 भन्दा बढी कारहरू छन्। तर ध्यान राख्नुहोस् कि यसको उपलब्धता परिवर्तनको विषय हो र भौगोलिक स्थान र सवारी साधन ट्रिम स्तरको आधारमा फरक हुन सक्छ। निम्न लिङ्कमा एन्ड्रोइड आधिकारिक पृष्ठ तपाईंले हाल यो उपयोगी उपकरणसँग मिल्दो सवारी साधनहरूको मेक र मोडेलहरूको सूची पाउनुहुनेछ।
कार स्क्रिनमा एन्ड्रोइड अटो
यदि तपाइँको गाडी उपयुक्त उपयोगिताहरूको सूचीमा ती मध्ये एक हो भने, तपाइँ आफ्नो स्मार्टफोन एक मार्फत जडान गर्न सक्नुहुन्छ USB केबल वा ताररहित5GHz Wi-Fi मार्फत। तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोनको एन्ड्रोइड संस्करण 6.0 वा सोभन्दा माथिको हुनु आवश्यक छ।
USB केबल मार्फत। सिंक्रोनाइजेसन यी चरणहरू पछ्याउने जस्तै सरल छ:
USB केबललाई गाडी र स्मार्टफोनमा जडान गर्नुहोस्।
यदि तपाइँको टर्मिनलमा एप स्थापना गरिएको छैन वा यसको नवीनतम संस्करणमा अद्यावधिक गरिएको छैन भने, तपाइँलाई नवीनतम संस्करण स्थापना गर्न प्रेरित गरिनेछ।
त्यसपछि सिङ्क प्रक्रिया पूरा गर्न अन-स्क्रिन प्रम्प्टहरू पालना गर्नुहोस्।
गाडीको स्क्रिनमा एन्ड्रोइड अटो एप लन्च गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो यन्त्र नियन्त्रण गर्न सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ।
एन्ड्रोइड अटो वाइफाइ समर्थन अझै केही हदसम्म सीमित छ, र सबै सवारी साधन र उपकरणहरू यसको लागि योग्य छैनन्। ताररहित सिंक्रोनाइजेसनका लागि चरणहरू अघिल्लोसँग धेरै समान छन्:
USB केबललाई गाडी र स्मार्टफोनमा जडान गर्नुहोस्। यो पहिलो सिङ्क्रोनाइजेसनको लागि मात्र आवश्यक छ।
कन्फिगरेसन पूरा गर्न मोबाइल ब्लुटुथमा जडान हुनेछ।
अब तपाइँ USB केबल अनप्लग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पटक तपाईंले एप प्रयोग गर्न आवश्यक छ, यो स्वचालित रूपमा जडान हुनेछ।
स्मार्टफोन स्क्रिनमा Android Auto
तपाईंको गाडी एन्ड्रोइड अटोसँग मिल्दो छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, भर्खरै। तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनको स्क्रिनमा सीधा यसको कार्यक्षमताहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइडको संस्करणमा निर्भर गर्दै, तपाईंले Google Play बाट विभिन्न अनुप्रयोगहरू बीच छनौट गर्नुपर्नेछ:
6.0 देखि 9.0 सम्मका संस्करणहरूको लागि, अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस् एन्ड्रोइड कार.
संस्करण 10 र 11 को लागि यो अन्य अनुप्रयोग स्थापना गर्न आवश्यक छ: फोनहरूको लागि एन्ड्रोइड ओटो, पूर्व-स्थापित संस्करण मात्र उपयुक्त सवारी साधनहरु संग सिंक गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एन्ड्रोइड संस्करण १२ मा तथाकथित "ड्राइभिङ मोड" एकीकृत छ। यस तरिकाले, एन्ड्रोइड ओटोको स्थापना अब आवश्यक छैन, किनकि यसले यसको सबै प्रकार्यहरू समावेश गर्दछ।
Android Auto कसरी प्रयोग गर्ने?
यद्यपि एन्ड्रोइड अटो इन्टरफेस धेरै सरल र सफा छ, तर ध्यान भंग हुनबाट जोगिन स्क्रिनलाई नछुन सिफारिस गरिन्छ।
यसको सट्टा, हामी प्रयोग गर्न सक्छौं प्रसिद्ध संयोजन "ओके, गुगल" संग गुगल सहायक र यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवाज आदेशहरू दिन सुरु गर्नुहोस्।
तपाईले उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, कसरी एक साधारण ठेगानामा पुग्ने भनेर देखाउनको लागि "मलाई प्लाजा डे एस्पानामा लैजानुहोस्" वा आफ्नो मनपर्ने पोडकास्ट प्ले गर्न। यो सबै ध्वनि प्रतिक्रियाको साथ हो ताकि यदि तपाईं चाहनुहुन्न भने स्क्रिनमा हेर्नु पर्दैन। सबै आवश्यक अनुमतिहरू प्रदान गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्न यो राम्रो विचार हो ताकि तपाईंले उडानमा यो गर्नुपर्दैन।
यहाँ हामी तपाईंलाई एउटा छोड्दछौं तपाईंले गर्न सक्ने चीजहरूको सूची एन्ड्रोइड अटो मार्फत:
प्रयोग गरेर आफ्नो रोजाइको गन्तव्यमा पुग्नुहोस् गुगल नक्शा वा Waze र GPS नेभिगेसन निर्देशनहरू पछ्याउँदै। यसले तपाईंलाई वास्तविक-समय ट्राफिक अलर्टहरू पनि प्रदान गर्दछ र तपाईंलाई मार्ग, आगमन समय र तपाईंले बाटोमा सामना गर्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरूमा अद्यावधिक जानकारी प्रदान गर्दछ।
Google सहायकलाई आफ्नो जाँच गर्न सोध्नुहोस् क्यालेन्डरियो तपाइँ कहाँ जानु पर्छ वा तपाइँ के पेन्डिङ कार्यहरू जान्न।
थप्नुहोस् पर्सनलाइज्ड न डिस्टर्ब सन्देश ड्राइभिङ गर्दा विचलित हुनबाट जोगिन।
कल गर्नुहोस् र जवाफ दिनुहोस् एकल स्पर्शको साथ गुगल सहायकसँग।
आफ्नो सम्पर्क सूची र पहुँच गर्नुहोस् सन्देशहरू पठाउनुहोस् वा प्राप्त गर्नुहोस् गुगल सहायकसँग, या त द्वारा एसएमएस वा सन्देश अनुप्रयोगहरू मार्फत जस्तै ह्याङ्गआउट्स, व्हाट्सएप वा स्काइप, अन्य धेरै मध्ये।
यो धेरै संग संगत छ संगीत, रेडियो, समाचार, अडियोबुक र पोडकास्ट एपहरू।
तपाईंले एन्ड्रोइड ओटोसँग अनुप्रयोगहरूको अनुकूलता प्रत्येकको विकासकर्तामा निर्भर गर्दछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। सौभाग्य देखि, अधिक र अधिक मान्छे यो विकल्प छ।
कुन देशहरूमा एन्ड्रोइड ओटोको लागि Google सहायक प्रयोग गर्न सकिन्छ?
दुर्भाग्यवश एन्ड्रोइड ओटोको लागि गुगल सहायक संसारमा कतै उपलब्ध छैन। हामी तपाईंलाई मा देशहरूको अद्यावधिक सूची परामर्श गर्न सिफारिस गर्छौं Android Auto मद्दत केन्द्र.
अब जब हामीले तपाईलाई यस उपकरणमा के समावेश छ र यसले कसरी काम गर्छ भनेर बतायौं, सडकबाट आफ्नो आँखा हटाउन र सुरक्षित रूपमा ड्राइभ गर्न अब कुनै बहाना छैन.
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » अपरेटिंग प्रणाली » एन्ड्रोइड अटो के हो र यसले कसरी काम गर्छ?
यदि मेरो ट्याब्लेट अन गर्दैन भने के गर्ने
TikTok वाटरमार्क कसरी हटाउने र छविहरू डाउनलोड गर्ने?